Indiemark iyi i-imeyili ejensi yezentengiso, nebhizinisi lami lesithathu. Imizamo yami yokuqala emibili yaqala kancane, yakhula ngokomzimba, futhi ngenhlanhla yomibili yaphela ngeBig Bang. Manje njengoba umnotho usuphendukile, i-Indiemark ibonakala isenkambweni efanayo.
Kuze kube manje, sengiqalile (kepha angikaze ngiqede) inqwaba yezinhlelo zebhizinisi zakudala. Uyazi… ukuhlukahluka okunothile ngombhalo kwamakhasi angama-25. Ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi nginezinhliziyo ezilunge kakhulu noma anginasineke kakhulu noma zombili. Ngakho-ke ngivame ukukuphakamisa nje “ngohlaka lwebhizinisi”, kodwa ngasese ngifisa ukuthi ngabe ngithole isikhathi sokubala imigwaqo yami yesikhathi eside nesifushane ngokuningiliziwe.
Ngakho-ke kulokhu ngibhale uhlelo lwebhizinisi olubukwayo.
Ngezansi uzothola inguqulo ebhangqwe phansi. Kuza nomhlahlandlela weTactical ongumngane, ongatholakali lapha. Inamanzi kakhulu.
Ngicela… ungitshele ukuthi ucabangani!
Tags: ibhizinisiumhlahlandlela webhizinisiuhlelo lwebhizinisiIsikhungo Sokumaketha nge-imeyiliumhlahlandlela wokuthengisauhlelo lokumakethauhlelo lwebhizinisi olubukwayo
Ngaphezulu Kokusetshenziswa Kwezinjini Zokucinga
Kwesinye isikhathi izindlela zomphakathi zivaliwe
Ngo-Apr 29, i-2010 ku-12: i-46 PM
Ngiyavuma - lo ngumbono omuhle, inqobo nje uma kuhambisana nemininingwane “enamanzi” (njengoba uyibiza kanjalo). Akukhathalekile ukuthi ubhekise kubani (isb. Ongxiwankulu bezentengiselwano, izingelosi, amabhange, abasebenzi abangahle babe khona, njll.), Abantu bayabonakala futhi, ngikholelwa ukuthi, bayabazisa ubuciko ekuvezeni izinhlobo zendabuko zokuqukethwe (isb. Izinhlelo zebhizinisi). Umsebenzi omuhle, Scott! 😀
UKatie Van Domelen
Ngo-Apr 29, i-2010 ku-2: i-09 PM
Ngiyakuthanda lokhu. Umsebenzi omuhle!
Ngo-Apr 29, i-2010 ku-7: i-21 PM
Ngabelana ngenhloso yakho yokwenza ukuthi izinhlelo zebhizinisi zifushane ngokwanele ukuthi zibe wusizo. 25 amakhasi? Akekho oyoke afunde. 1 ikhasi? Izobanjwa eduze kwamehlo womuntu wonke futhi ibhekwe kaningi.
Lokho kusho, angicabangi ukuthi lesi sibonelo siyasebenza. NGIYAKUTHANDA impela ukuthi ichaza uhlelo lwezinto eziphilayo zabathintekayo, ngasinye sinezidingo nokuziphatha okuhlukile. Noma kunjalo, ihlala ezingeni eliphakeme kakhulu. Kungaphezulu kwesifinyezo kunecebo, kakhulu i-What ne-Who, ayanele ye-How.
Uhlelo lwebhizinisi olusebenzayo - futhi lungenziwa ekhasini elilodwa noma amabili - kufanele luxhume umgomo nezinjongo ezisezingeni eliphezulu ngamasu nezenzo ezithile. Ukuphikisile ukucabanga kwami ​​ngokufaka ingxoxo ecebile yokuthi Ngubani, kepha ekugcineni, angizizwa ukuthi uhambe ibanga elanele ukwenza lokhu kwenzeke.
Ngingathanda ukuqhubeka ngixoxa!
Ngo-Apr 29, i-2010 ku-10: i-24 PM
@mark Uqinisile. Lo msizi obukwayo usebenza kuphela ekunikezeleni ithimba lethu (futhi lisikhumbuze) ngomhlaba, noma ngomkhathi. Okushodayo yizinhloso zethu, imisebenzi yethu, nezilinganiso zethu. Labo bahlala kumlingani oyindandatho enezindandatho ezintathu ebhalwe ngokuthi 'Ukusebenza Kwamaqhinga'. Nayo iqukethe umbhalo / umdwebo futhi imfushane kakhulu, kepha iyahleleka futhi iyaguquguquka.
@Katie no @Dave Siyabonga ngamazwi anomusa. Ngijabulele kakhulu futhi ngazuza kule nqubo. Futhi, bekumnandi.
May 9, 2010 ku-4: 18 PM
Uma kungekho okunye okungenze ngacabanga. Ngimusha entweni yohlelo lwebhizinisi futhi benginesikhathi esithile ngiqeda iBp ejwayelekile. Lokhu yinto engingayenza nokho, okuthile okufanele kusize ekuqedeni imigoqo engibonakala ngiyakhele lapho ngihlelela ibhizinisi “elijwayelekile”. Ikakhulukazi uma lokho kungeyona into engifuna ukuba nayo.
Jan 6, 2012 ngo-7: 50 PM
Uxoxa indaba ukuze wonke umuntu aqonde uhlelo / isu lebhizinisi ukuze ube nethuba elingcono lokwenza ngempumelelo.